राज्यलक्ष्मी शक्य यो पुरानो गीतको आज याद आएको छ । किनभने यस गीतले नेपालको विगतदेखि वर्तमानसम्मको प्रतिनिधित्व गरेको छ, नेपालको यथार्थ, शासनव्यवस्था आदिलाई झल्काएको छ । साथै, नेपालमा समयसमयमा परिवर्तनका लागि भएका क्रान्तिकारी प्रयासहरुलाई पनि यो गीतले आत्मसात् गरेको छ । यो गीत नेपालमा दशकौंदेखि चल्दै आएको वर्गीय, जातीय, लैंगिक आन..
पहिलो चरणको निर्वाचनले नयाँ संविधान कार्यन्वयन गर्ने क्रमको पहिलो खुट्किला पार गरेको छ । स..
–गोर्खाली अनिल बाबुराम भट्टराई (लालध्वज) ज्यू, कुनै राजनीतिक दल र सङ्गठनभन्दा माथि सोच राख..
हरि थापा वैशाख ३१ अगावै सामाजिक सञ्जालमा पहुँच भएकाहरुले देश विदेशबाट विभिन्न पार्टीको नाम..
वीरेन्द्र रावल चैते दशैँमा घर आएका अछाम लयाटीका बिर्स भुल सोमबार त्रिनगर भन्सार कार्यालय ह..
विश्वप्रकाश भुसाल मैले देखेको मेरो पुस्ता काङ्ग्रेस नै हुन् । मेरा हजुरबुबा र बुबा काङ्ग्रेस नै हुन् । अहिले पनि मेरा मान्यजन, गरू, आफन्त अधिकांश काङ्ग्रेस नै छन् । ममा उहाँहरूप्रति सादर, सम्मान एवं नमन यथावत नै छ । मैले कहिल्यै पनि उहाँहरू काङ्ग्रेस हो भनेर मन नपराएकै छैन । अर्थात् कोही पनि काङ्ग्रेस भन्दैमा […]
उदय राई दक्षिण कोरियामा अहिले रोजगार अनुमति प्रणालीलगायत अन्य प्रणालीअन्तर्गत आएर काम गर्ने प्रवासी मजदुरको सङ्ख्या धेरै छ । यी प्रवासी मजदुर विभिन्न क्षेत्र (कृषि, उत्पादन, निर्माण, सेवा, मत्स्यपालन आदि) का विभिन्न कम्पनीमा काम गरिरहेको छन् । धेरैजसो प्रवासी मजदुर अहिले रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत आएर काम काम गरिरहेक..
बाबुलाल बुढा मगर नौ महिना अगाडि बनेको नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीको गठबन्धनको सरकारको म्याद अब सकिन लागेको छ । यससँगै विभिन्न शङ्का आशङ्का पनि उत्पन्न भएका छन् । के प्रचण्डले सजिलै सत्ता हस्तान्तरण गर्लान् त ? भित्री सहमति के छ ? प्रचण्डलाइ नै पुनः प्रधानमन्त्री बनाउने लबिङ चलिरहेको भए पनि प्रचण्डले अस्वीकार गरिसकेका छन् । [&hell..
एनआरएन नेतृत्वको बहस
मेघराज सापकोटा गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)को आठौँ विश्व सम्मेलन आगामी अक्टोबर १४ देखि १८ सम्म काठमाडौँमा आयोजना हुने भएको छ । सम्मेलनको मिति तय भएसँगै अबको नेतृत्व कसको पोल्टामा पर्ने भन्ने गरमागरम बहस एनआरएनमा सुरु भएको छ । एनआरएनएमा अहिलेसम्म विश्वभरमा ७५ देशमा राष्ट्रिय समिति बनेका छन् । यी राष्ट्रिय समितिले आगामी सेप्टेम..
मधेस आन्दोलनको चिरफार
गङ्गा पी. शर्मा जन आन्दोलन २०६२–६३ को सफलतासँगै नेपालमा करिब २४० वर्ष लामो राजतन्त्र अन्त्य भई संविधानसभा मार्फत गणतन्त्र स्थापना भयो । वि.स. २०६३ माघ १ गते घोषणा भएको नेपालको अन्तरिम संविधानले दस वर्ष लामो सशस्त्र युद्धलाई सफल बिराम त लगायो तर उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन मधेसी फोरमले संविधानको प्रतिलिपि जलाउँदै मधेसमा आन्द..
ब्लगः न्यायालयमा ठाडो हस्तक्षेप
सुजन देवकोटा प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथिको महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनु राजनीतिक पार्टीबाट अछुतो रहेर कसैले पनि केही गर्न नसक्ने कुराको प्रष्ट उदाहारण हो । नेपालकै पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश र निडर एवं कसैप्रति पूर्वाग्रही नरहेकी भनिएकी प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीशमाथि नै महाअभियोग लाग्नु नेपाली इतिहासमै दुःखको कुरा हो ।..
ब्लगः महाअभियोग स्वाभाविक प्रक्रिया
विनोद तिम्सिना सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि व्यवस्थापिका संसदमा नेपाली काङ्ग्रेसको प्रस्ताव र माओवादी केन्द्रको समर्थनमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि आम सञ्चार माध्यमले प्रमुख स्थानका साथ समाचार प्रकाशित, प्रसारण गरेका छन् । विशेषगरी सामाजिक सञ्जालमा तीव्र आक्रोसपूर्ण अभिव्यक्ति आएका छन् । यस्तो संवैधानिक प्रकृ..
सम्पन्न पाण्डे हिन्दू धर्म मात्र हैन, यो एउटा जीवन जिउने शैली हो । मानव सभ्यताको उत्पत्तिसँगै उत्पन्न भएको जीवन पद्धति हो । मानव जीवनको मूल आधार शान्ति र समृद्धि हो । यो धर्मले मानव जीवनलाई सहज तुल्याउँछ । यसका कतिपय दर्शन विज्ञानसम्मत देखिएका छन् । नेपाल विश्वमा सबैभन्दा बढी हिन्दू धर्मावलम्बी रहेको देश हो । […]
राज्यलक्ष्मी शाक्य नेपालमा ‘गोरखा भूकम्प–२०७२’ गएको पनि दुई वर्ष पुगेको छ । त्यो त्रासदीपूर्ण दिन सायद कसैले नै भुल्न सक्छ होला । उक्त भूकम्पमा परेर मेरो पनि घर भत्केको थियो । भूकम्प गएलगत्तै उद्धार र राहतमा सरकारले देखाएको तत्परता विश्वमाझ नै प्रशंसनीय बनेको थियो । यद्यपि, पुनर्निर्माणमा भने सरकार असफल भएको छ । यो दुई [&helli..
दीपक घिमिरे गएको आइतबार र सोमबार सामाजिक सञ्जालमा दुईथरी स्टाटसले स्थान पाए । ती स्टाटस निक्कै चर्चित पनि भए । एउटा थियो– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भारत भ्रमणको अवसरमा नेपालमा दिइने सार्वजनिक सरकारी बिदा । अनि अर्को थियो– भ्रमणमा भारत पुगेकी भण्डारीलाई स्वागत गर्न आइपुगेका भारतीयहरुको सामूहिक तस्बिर । चर्चा बिदाको दिनको । ..
एल.बी.श्रेष्ठ २०७२ सालमा वैशाख १२ गते महाभूकम्प गएको थियो । महाभूकम्प गएको ठ्याक्कै २ वर्ष पुग्यो । यसले १४ वटा जिल्लाका भौतिक संरचना धेरैजसो ध्वस्त भएका थिए । हजारौँ मान्छेहरु मरे, हजारौँ बेपत्ता, हजारौँ घाइते, अपाङ्ग, हजारौँ घरबारविहीन र टुहुरा भए । मर्ने त मरेर गए, बाँच्नेको जिन्दगी ज्यादै कष्टकर बन्न पुगेको छ । खानलाई [&hell..
शैलेन्द्र थापा हामी एकै दिन राष्ट्र सेवाका लागि कम्ब्याट ड्रेस लगाउँदै थियौँ । त्यसपछिका नौ वर्षमा हाम्रोे मित्रता शब्दमा वर्णन गर्न नसक्ने निकट हुन पुगेको थियो । हाम्रा कतिपय युनिट सँगै थिए र कतिपय व्यक्तिहरु हामीलाई सधैँ सँगै देख्दा सोध्ने गर्थे– “तपाईंहरु जुम्ल्याहा हो ?” भनेर । तनहुँस्थित डुम्रे बजारकी दिदीले यसरी नै सोध्दा ..
राज्यलक्ष्मी शाक्य भारतीय पत्रकार तथा पत्रकारिताका प्राध्यापकहरूको एक टोली अहिले नेपाल भ्रमणमा आएको छ । उनीहरूले मंगलबार नेपाली राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग पनि भेटवार्ता गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । भारतीय पत्रकारहरूसँगको भेटवार्तामा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध प्रगाढ रहेको बताउनुभयो । राष्ट्रपति भण्डारी..
लब्लीप्रसाद शर्मा शारीरिक रुपमा अपाङ्गता भएकाहरुलाई राज्यका विभिन्न निकायमा समावेश गराउन सरकारले आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । यसले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई थोरै मात्रामा भए पनि जीवन जिउन केही सहज भएको छ । यो एकदमै राम्रो व्यवस्था हो । यसले विभिन्न अवसरका लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि मात्र प्रतिस्पर्धा गराइ रोजगारीको अव..
हरि थापा नयाँ नेपाल भन्नुको अर्थ अर्को नेपाल होइन, हामीलाई व्यवस्था नयाँ चाहिएको हो । सुशासन चाहिएको हो । भौगोलिक रुपमा नेपाल हिजो जस्तो छ आज पनि त्यस्तै छ र भोलि पनि उस्तै हुनेछ । यसर्थ नयाँ नेपाल भनेको बेतिथिको अन्त्य र नीतिनियमको कार्यन्वयन गर्नु हो । नागरिकका पीडालाई सम्बोधन हुनु हो र जनमासमा प्रकट […]
राज्यलक्ष्मी शाक्य काठमाडौंवासीका लागि अहिले धूलो र धूवाँ ठूलो शत्रु बनेको छ । सरकारले नियमित रूपमा सडकको मर्मतसम्भार नगर्दा प्रदूषण बढिरहेको छ । त्यसमाथि अहिले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइप वितरणका लागि सडकहरू भत्काइएको छ । सडक भत्काएर त्यसै छोडिँदा धूलो उड्ने समस्याका कारण सर्वसाधारण जनताले निकै सास्ती खेप्नुपरिरहेको छ । हालै..
हरि थापा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, नमस्कार ! तपाईं सन्चै हुनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु र स्वस्थताको कामना पनि गर्दछु । तर तपाईं जतिसुकै खुसी भए पनि देश विसन्चो र नाजुक स्थितिमा पुगेको जानकारी गराउँछु । तर तपाईंहरु देश विदेश शयर गर्दागर्दै दसौँ वर्ष बिताइदिनु भएको छ । यसरी देश अधोगतितिर लागेकोमा हामी नागरिकलाई चिन्ता छ । प्रधानमन..
प्रवासी नेपालीको मष्तिष्कमा उब्जिएको राष्ट्रप्रेम
लक्ष्मण खनाल “बाबु मैले एउटा अभियान चलाउने भने सल्लाह, सुझाव र सहयोग गर्नु पर्यो ।” “कस्तो अभियान ?” “नेपाल भारत सीमामा काँडेतार र पर्खाल लगाउन आर्थिक सङ्कलन अभियान ।” “कुरा एकदम ठीक हो दाइ तर यो राज्यको केन्द्रीय राजनीतिसँग जोडिएको विषय हो । देशको शासन सत्ता सम्हालेर बसेका नेताहरु जबसम्म संवेदनशील हुदैनन् तबसम्म हामीले चाहेर [..
स्थानीय निर्वाचनमा वातावरणीय मुद्दा
खेमराज अवस्थी आजका मितिसम्म सबै नेपालीलाई नगर तथा गाउँपालिका निर्वाचनले छोइसकेको छ । राजनीतिमा चासो राख्ने जोकोहीलाई चुनवले कुनै न कुनै रुपमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव पारेकोे छ । झण्डै बीसौँ वर्षदेखि हुन नसकेको स्थानीय निर्वाचनको घोषणाले जनतामा उमङ्ग र राजनीतिक दलका कार्यकर्तामा जित हातपार्ने कसरत हुनु सामान्य हो । यो उमङ्ग प..
खेमराज अवस्थी आज पmेरि चारजना नेपालीको आफ्नै कर तिरेकोे पैँसाले किनेको बन्दुकले ज्यान लिएको छ । अर्कोतिर तिनै नेपालीका बर्दीधारी दाजुभाइ घाइते भई छटपटाउँदै बसिरहेका छन् । एक हुल युवा लिएर एकथरी मन्छेहरु देश दौडाहामा छन् । त्यस्तै कोठे हुल लिएर अर्का थरी समाचार सुन्दै बसेका छन् । समाचार माध्यमले कसैलाई मोर्चा, कसैलाई प्रतिपक्ष, क..
स्कुलमा रिजल्ट आउने तयारी हुँदै थियो । कक्षा ५ मा जेहेनदार तथा मेधावी कहलिएको विद्यार्थी म । सबैले दोस्रो हुने दाबेदारी प्रस्तुत गरेका थिए । कारण के थियो भने त्यो कक्षामा सधैँ केटी मात्र प्रथम हुने परम्परा जस्तैै बनिसकेको थियो । तर एकाएक दोस्रो स्थानमा प्रथम हुनेको नाम आएपछि सबको नजर म माथि पर्यो र […]
शम्भु प्रसाद सापकोटा ‘अखण्ड’ सम्पूर्ण राष्ट्रवादी नेपाली नागरिकको चाहनाअनुसार एक भएको राप्रपाको हालैमात्रै एकता महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ । गाउँ नगर, क्षेत्र, जिल्ला अघिवेशन हुँदै केन्द्रीय महाधिवेशनमार्फत पार्टीले नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ । केन्द्रीय महाधिवेशनले अहिले राष्ट्रले खोजेको जस्तो राष्ट्रवादी विचार बोकेका र राष्ट्रवादी..